Tehirizo amin'ny pejy PDF ny pejin-tranonkala (pikantsary an-tsary) Avy amin'ny Linux
Mitahiry pejy web (pikantsary an-tranonkala) amin'ny PDF miaraka amin'ny baiko iray
Indraindray izahay te-hitahiry zavatra amin'ny tranokala PDF amin'ny PC-nay, noho izany misy ny fitaovana: wkhtmltopdf
Izany hoe, amin'ny alàlan'ny baiko dia ahafahantsika mitahiry pejy X amin'ny .pdf, fa aleo apetraka aloha ilay rindranasa:
Ao amin'ny Debian, Ubuntu na ny derivatives dia apetraho fotsiny wkhtmltopdf:
Hametraka ny fiankinan-doha aminy toy ny webkit sy tranomboky qt sasany izy io, fa fitehirizam-boky izy ireo ary tsy misy zavatra hafahafa 😉
Amin'ny distro hafa dia azoko an-tsaina fa tsy maintsy antsoina mitovy ny fonosana.
Vantany vao apetrakao izy io, dia tena tsotra ny fampiasana azy, ohatra, hamonjy www.google.com isika:
Izany hoe, ampitaintsika ny URL izay tadiavinay ho tahiry voalohany, ary ny anarana sy .pdf an'ny fisie farany tadiavinay ho masontsivana faharoa.
Mamela pikantsary iray momba ny fomba anehoana ilay .pdf amiko:
Ary ity ny .pdf:
Sintomy ny rakitra Google.pdf
Raha te hahalala safidy bebe kokoa amin'ity rindranasa ity ianao dia tsy maintsy isalasalana fa tokony hamaky ny fanampiana ianao (lehilahy wkhtmltopdf) satria somary midadasika ilay lisitra, dia misy safidy ao amin'ny fampiasana proxy, fampiasana cookies, lohateny manokana, encoding-tranonkala, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Mitahiry pejy web (pikantsary an-tranonkala) amin'ny PDF miaraka amin'ny baiko iray
Fitaovana tena tsara! Misaotra amin'ny vaovao!
Maharary ny anarana sarotra tadidy che ...
Momba ilay anarana ... eny, afaka manao alias foana isika 😉 - » https://blog.desdelinux.net/tag/alias/
Fomba mora ahazoana tranokala ivelan'ny alàlan'ny printfriendly.com
Efa ela aho no nampiasa pdfmyurl, saingy efa nanandrana an'ity aho ary amin'ny arch tsy mandeha amiko, mody misintona azy avy eo tsy eo. Rehefa manam-potoana bebe kokoa aho dia hitako fa tsy ampy trano famakiam-boky na zavatra hafa aho satria vao napetraka.
Miarahaba anao ary mirary soa ny zavatra ataonao 🙂
Host, tiako ny lahatsoratray KG **** fa ity dia fomba tsara iray handaniana fotoana hanasarotana ny fiainana sy ny sisa apetraky ny olon-kafa….
Etsy ankilany, misy safidy toa an'i Fernando ary manolotra fanadiovana madio kokoa amin'ny Chrome aho.
Avy eo tsara kokoa noho izany rehetra izany: Nixnote miaraka amin'ny plugin plugin mazava ho an'i Evernote.
Ny fomba tokana hitako kely kokoa dia mitombina rehefa miasa tsy misy interface izahay, raha tsy izany. … .Kk
Raha tsy te-hametraka plugin ianao ao anaty tranokala, na tsy te-hanokatra ny tranokala fotsiny ianao dia ity safidy ity no hitako tsara indrindra.
Ao amin'ny Linux ny fahasamihafana dia tsy isalasalana fa tombony, misy ireo izay maniry ny hampiasa addons ho an'ny rindranasa ary ny hafa dia maniry tsotra fotsiny ny fampiharana tsy miankina amin'ny asa samihafa.
Mametra ny tenako hizara ny fahalalako rehetra aho, ianao (ny mpampiasa) misafidy ny fomba tianao indrindra 😉
Toa manan-kery tanteraka amiko ilay fampianarana saingy tsy haiko, tato ho ato dia nanjary nahazo aina aho ary mikasika ny zava-dehibe fotsiny no kitikitiko. Hataoko ao amin'ny Nixnote, XD ihany koa ity lahatsoratra ity
Raha mila mampiasa an'ity fitaovana ity amin'ny script ianao na manodina ny fanovana pejy web ho PDF dia apetrakao ao amin'ny Evernote, Chromium ary ny fitaovana ampiasaina rehetra izay tsy hiposahan'ny Masoandro velively.
Ankoatr'izay, inona no manahirana momba an'io? Malahelo, saingy mora toy ny mandika ny URI, mametaka azy eo amin'ny tsipika fitenenana (mora loatra ho antsika izay mampiasa Yakuake) ary manampy ny anaran'ny filename.
Miala tsiny !!!!!!!!!!! Samy mitady ny tsotra indrindra fa efa nolazaiko taminao, na dia izay isainao aza dia mahomby amin'ny fotoana na enti-miasa. Amin'izany no ilazako aminao ny zava-drehetra, raha te hanao zavatra vita amin'ny tsindry iray ianao, dia mila asa roa farafaharatsiny.
1 Antsoy bash
Toy izany ve ny baiko?
Raha tadidinao dia mandehana amin'ny dingana 3, fa dingana 2.
2 Tadiavo ny baiko ao anaty naoty (fotoana bebe kokoa lostoooooooooo)
3 Mandrosoa ny programa. (AHhhh, miadana kokoa ny fanoratana raha tsy manindry)
Raha ny amiko, tsindrio iray monja, ary manana fikambanana tsara kokoa aho, ary rehefa te-hahita zavatra aho dia ampiarahiko amin'ny Nixnote. Fa raha tsy tiako ny Nixnote, CleanSave irery dia tsara kokoa, raha ny marina dia efa afaka mandefa azy mivantana any amin'ny Dropbox aho, sns. sns sns sns
Avy eo, io script io dia mamorona dika mitovy amin'ilay pejy, raha ny zavatra lazaiko kosa dia ny mahaliana anao ihany no adikao.
Noho izany, aza manaikitra ny rambonao. Mandrosoa aho satria mety haneso azy io.
“Na ny isa isainao aza dia mahomby amin'ny fotoana na enti-miasa. Amin'izany no ilazako aminao ny zava-drehetra, raha te hanao zavatra vita amin'ny tsindry iray ianao, dia mila asa roa farafaharatsiny.
3 Mandrosoa ny programa. (AHhhh, miadana kokoa ny fanoratana raha tsy manindry »
Ahhh jereo izay hitako, misaotra!
Ka miadana kokoa ny mitendry noho ny fampiasana totozy!? Tokony hanome toro-hevitra ireo injeniera NVidia ianao rehefa mampiasa Emacs sy Vim:
(Fa adala manao ahoana ireto tovolahy ireto, mampiasa Emacs na Vim ho an'ny kaody an'arivony soratany, dinihina ary andrana isan'andro, raha tsy hisy ilana azy ireo ... ah, tsia, ajanony ... injeniera izy ireo miaraka amin'i Ph. D.! Mmm ... FOMBA!)
Na mety azonao atao ny manazava amin'ireo mpitantana ny rafitra an'arivony izay mifampiraharaha amin'ny Vim sy Emacs isan'andro avy amin'ny console iray amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana sy fanararaotana ny totozy?
«1 Miantso bash
Raha tadidinao dia mandehana amin'ny dingana 3, raha tsy dingana 2. »
Manodikodina ahy ianao, sa tsy izany? Sa tsy mbola nanokatra console amin'ny fiainanao mihitsy ianao?
«2 Tadiavo ny baiko ao anaty naoty (fotoana bebe kokoa lostoooooooooo)»
Fandefasana trolling bebe kokoa?
«3 Mandrosoa ny programa. (AHhhh, miadana kokoa ny fanoratana raha tsy manindry »
Mbola bebe kokoa aza ny trolling !!!! ??? Sa tsy fantatrao fotsiny izay lazainao?
Ka aza manaikitra ny rambonao. Mandroso ihany aho satria haneso azy io amin'ny farany. "
Vao avy nasehonao fa tsy manana an'io lamba io ianao, milamina.
Hahaha, lazaiko aminao fa tsy maintsy ho fantatra ny hitondra azy ireo am-pahamendrehana, tena toheriko tanteraka ny: mihaino mozika amin'ny terminal, mibitsika eo amin'ny faran'ny terminal, mivadika amin'ny terminal sns sns. Izany rehetra izany dia toa ahy fa an'ny ankizy tsy manana fomba hafa mahasoa mandany fotoana fotsiny.
Raha ny momba ny tsindry amin'ity lohahevitra ity dia namoaka hadalana ianao izay tsy inoanao. Alao ity fandidiana ity dia ho hitanao fa tsy mitana izay lazainao.
Saingy, satria tsy manana ny maha-izy anao ianao ary hitanao fa zavatra iray no nataon'i Nvidia, ary satria izy ireo no tianao hananana rehefa lehibe ianao (Te ho mpanamory sambondanitra aho) dia ho mpaka tahaka foana ianao.
Ilaina ny terminal fa tsy fanasitranana. Raha ny marina dia aleoko ny distros toy ny openuse izay miaraka amin'ny YaST dia sarotra amiko ny hikasika azy amin'ny asa fitantanan-draharaha. Ho efa antitra aho izao.
Raha tsy izany dia ataonao mazava tsara fa "mpanaraka" ianao izay manandrana mampiseho izay tsy anao ary mieritreritra ianao fa ny fampiasana ny terminal na aiza na aiza tsy misy dikany dia mampiavaka anao. Hafa, tsy mitovy raha manao izany fa amin'ny lafiny ratsy. Ahh, tsy mahay afa-tsy ny milaza troll ianao, any dia mbola mpanaraka ny taha faharoa ianao.
Tsy misy zaza, nahafinaritra izany. Salama.
Edduardo dia hoy izy:
Raha tena kamo ianao na tianao ny mandeha ho azy amin'ny zavatra farany ambony indrindra, azo antoka fa andevozin'ny terminal ianao, tsy hoe sarotra kokoa na sarotra kokoa izany, miankina amin'ny tianao hatao izany. Raha te hanana fotoana ianao dia tsindrio tsara, raha tsy izany dia manaova script mitady ireo tranonkala mahaliana ny mpamandrika ny pejinao ianao, avadiho ireo tranokala ireo ho pdf, hamafiso izy ireo ary alefaso amin'ny mail, na azonao atao izay azonao an-tsaina fotsiny amin'ny fahalalana sy ny terminal.
Miarahaba anao ary misaotra noho ny tendrony
Valiny tamin'i Edduardo
Heveriko fa mihasarotra kokoa izy rehetra ... Tsotra toy ny ctrl + p hanontana sy hisafidy amin'ny PDF, ary dia izay ...
juapushhhh ho an'ny olona ambony rehetra 😛
Fitaovana tena tsara miaraka wget dia nanampy ahy hitondra ny antontan-taratasin'ireo tranonkala sasantsasany amin'ny pdf. mahafaly
Arriaga dia hoy izy:
amin'ny archlinux dia tsy mandeha izy.
voalohany dia nanome ahy hadisoana gnome-keyring avy eo miaraka amin'ny sudo dia tsy manome ahy hadisoana izany fa tsy mamorona ny pdf.
Mamaly an'i Arriaga
Misy olona manampy ahy? xD tsy mandeha tsara
orana @ Ubuntu-12: ~ / Desktop $ wkhtmltopdf https://blog.desdelinux.net/guarda-paginas-webs-screenshots-de-webs-en-pdf-con-un-comando/ fitsapana.pdf
Pejy famoahana (1/2)
FAMPITANDREMANA: gnome-keyring :: tsy afaka mifandray amin'ny: / tmp / keyring-Uz7GwI / pkcs11: Tsy misy ilay rakitra na lahatahiry
Pejy fanontana (2/2)
Ary mijanona ho tsy afaka hisokatra ny fisie
Tena tsara ho an'ny rehefa tsy te-hanokatra ny browser izahay 😛
Amin'ny debian, miaraka amin'ny iceweasel / firefox sy amin'ny chromium / chrome dia azonao atao ny manonta pejy web amin'ny pdf. mandehana fotsiny amin'ny: pirinty, avy eo safidio ny safidy "pirinty amin'ny fisie" format output pdf. Ny zavatra mahaliana amin'ity safidy ity dia ny ahafahantsika manao configurations sasany momba ny fomba hanontana ny pejy amin'ny pdf
Ny tena marina dia marina ny anao, misy amin'ny chromium 😀 na dia izany aza no handinihako ity lahatsoratra ity. Misaotra anao
Tsy tsara kokoa ny CTRL + P, ary omena safidy hanonta rakitra ianao, omenao anarana ny antontan-taratasy tadiavinao ary dia izay.
Mila mamoaka izay hahitana ny PDF vita ianao hanodinana ny lahatsoratrao ...
Omeo laharam-pahamehana ireo baiko novonoina avy tao amin'ny terminal
Navoaka ny Android 4.2 Jelly Bean x86